20 | April | 2008 | Save Burma
Min Ko Naing – Leading Burmese Democracy Activist May Face Blindness
Min Ko Naing, the well-known ‘88 Generation student leader and Burmese political prisoner, has been suffering fromaserious eye infection for the past three weeks. Min Ko Naing requestedaconsultation with an eye specialist, but the authorities at Insein Prison in Rangoon – where Min Ko Naing is being held – have refused his request, claiming that an eye doctor will not be available before May.
Sources from inside the prison say that the condition of Min Ko Naing’s eyesight is seriously deteriorating to the point that he is unable to sleep or eat because of the pain of the infection.
The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) is very concerned that Min Ko Naing may loose his eyesight if he does not receive immediate treatment, and seeks help in persuading the Burmese military regime to provide Min Ko Naing with the appropriate health care he urgently requires.
Please direct your appeals to: Union of Myanmar Embassy, 19A Charles Street, Berkeley Square, London W1J 5DX, United Kingdom Fax: (+44-207) 6294169
ကိုကိုကြီး (၀ဲမှ ဒုတိယ)၊ ကိုမင်းကိုနိုင် (၀ဲမှ တတိယ) နှင့် ကိုဌေးကြွယ် (၀ဲမှ စတုတ္ထတို့ ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ သွားကြစဉ် တွေ့ရပုံ။ (မေ ၂၇၊ ၂၀၀၇)
အင်းစိန်ထောင်မှာ အထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ မျက်စိကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေတယ်လို့ မိသားစုဝင်တဦးက ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးခွင့် တောင်းထားပေမယ့် ခုချိန်ထိ မရသေးဘူး
လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ အစ်မဖြစ်သူကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။
“ကျမ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ကလေ၊ အဲဒီနေ့ ကျမသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ ၁၅ ရက်ရှိပြီတဲ့၊ မျက်စိစူးပြီး အောင့်နေတယ်တဲ့။ နှစ်ပတ်ပေါ့နော်၊ ကျမ ကြားထဲမှာ တပတ်ခြားသွားတာပေါ့။ မျက်စိစူးပြီး အောင့်နေတယ်လို့ပြောတော့ ဆရာဝန် လာတယ်တဲ့။ ရိုးရိုး ဆရာဝန်ပဲလေ၊ အဲဒီရိုးရိုးဆရာဝန်က မျက်စင်းတော့ပေးတယ်တဲ့၊ အဲဒီမျက်စင်းကို
သူခတ်တဲ့အခါကျတော့ သိပ်မသက်သာဘူးတဲ့။ မသက်သာတော့ သူ့ကို Eye Specialist လွှတ်ပေးဖို့ သူပြောတယ်၊ တောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်၊ နှစ်ခါလောက် တောင်းဆိုတယ်တဲ့။ Eye Specialist က တလကို တကြိမ်ပဲ ထောင်ထဲကို ၀င်တယ်ပေါ့၊ ဧပြီလအတွက်က မ၀င်သေးဘူးပေါ့၊ သူက မတ်လနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေ။”
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၁၃ ယောက်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ကတည်းက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင် ၈ လနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပေမယ့် ဥပဒေနဲ့အညီ တရားရုံးတင်စစ်ဆေးတာမျိုး ခုချိန်ထိ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူတို့အပေါ်စွဲတင်တဲ့ ပုဒ်မတွေကိုလည်း အမျိုးမျိုး
ပြောင်းပြီး တပ်နေခဲ့တာပါ။ စ ဖမ်းသွားတဲ့အချိန်တုန်းက ပုဒ်မ ၅ (ည)၊ တခါ အဲဒါကနေ ပုံနှိပ်အက်ဥပဒေ၊ နောက် ဗွီဒီယိုအက်ဥပဒေ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးပြောင်းတပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို တရားရုံးမတင်ဘဲ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတာကို ဥပဒေကြောင်းအရ ဘောင်ဝင်အောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ ခုလို ပုဒ်မတွေ ပြောင်းတပ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ (BLC) က ရှေ့နေတဦးဖြစ်သူ ဦးမင်းလွင်ဦးက ဗွီအိုအေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ တပ်ထားတဲ့ပုဒ်မကို အစ်မဖြစ်သူ ပြောပြခဲ့တာကတော့ … “နောက်ဆုံးတပ်ထားတာကတော့ ပုဒ်မ ၄ လို့ ပြောပါတယ်ရှင့်။”
ပုဒ်မ ၄ က ဘာဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပေမယ့် အမျိုးသားညီလာခံကို ဆန့်ကျင် နှောင့်ယှက်ခြင်းကနေ ကာကွယ်တဲ့ဥပဒေ ၅/၉၆ နဲ့ အကျုံးဝင်တဲ့ပုဒ်မ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဦးမင်းလွင်ဦးကပဲ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပုဒ်မအရ ပြစ်ဒဏ်စီရင်မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ကနေ အများဆုံး နှစ် ၂၀ ထိ ချနိုင်တဲ့အပြင် ငွေဒဏ်လည်း
အခုအချိန်ဟာ စစ်အစိုးရက အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို လူထုဆန္ဒခံယူဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်ဖြစ်ပြီး အကျဉ်းထောင်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့လူတွေကိုလည်း မဲပေးခိုင်းဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ထွက်နေပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူကို မေးကြည့်ပါတယ်။
“သူတို့ မဲပေးရမယ်ထင်တယ်တဲ့၊ သူတို့ကို မဲပေးခိုင်းဦးမယ်တဲ့၊ အဲလိုတော့ ပြောပါတယ်ရှင့်။ သူပြောတယ်၊ အထဲကနေတဲ့ လူတွေလည်း မဲပေးရဦးမယ်တဲ့။”
ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ ပထမတကြိမ်မှာလည်း ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ၁၅ နှစ်ကျော် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသူပါ။ အဲဒီအကျဉ်းစံကာလ သက်တမ်းရှည်အတွင်း ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းခဲ့ရသလို ခုတကြိမ် ပြန်အဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာလည်း ထောင်တွင်းနေရတဲ့ အခြေအနေက မကောင်းတာကြောင့် မိသားစုက စိုးရိမ်နေကြတာပါ။
“ကျန်တဲ့ ကျန်းမာရေးကတော့ သူက အာရုံကြော အားနည်းတယ်လေ၊ အာရုံကြော အားနည်းတဲ့ရောဂါရှိတယ်။ အဲဒါကို သူနေရတဲ့အခန်းက တအား စိုစွတ်ထိုင်းမှိုင်း တယ်လို့ပြောတယ်လေ။ စိုစွတ်ထိုင်းမှိုင်းတော့ နေရထိုင်ရ သိပ်တော့ အဆင်မပြေဘူး။ နောက်ပြီးတော့ လောလောဆယ်က လမ်းလျှောက်ခွင့်ပိတ်လိုက်တော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ ကျမ လောလောဆယ်စိတ်ပူနေတာ အဲဒီမျက်စိကို အရမ်းစိုးရိမ်တယ်လေ။ အရှေ့မှာ (ကို) လှမျိုးနောင်တုန်းကလည်း ဖြစ်သွားတော့လေ။ အဲဒါကို စိတ်ပူနေတာပေါ့။”
သူပြောသွားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ ကိုလှမျိုးနောင်ဟာလည်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး မျက်စိ ဆေးကုသခန်းမှာ ဆေးကုသနေချိန် သူ့ကို ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။ ဖမ်းဆီးပြီးနောက်ပိုင်း စနစ်တကျ ကုသမှု မခံယူရတာကြောင့် မျက်စိတလုံး ကွယ်သွားခဲ့ရပြီးပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အရေအတွက်ကို ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မပြောနိုင်ပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေအရ ၁၃၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အကျဉ်းသားတွေအပေါ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ညံ့ဖျင်းတာ၊ ဆိုးရွားညံ့ဖျင်းတဲ့ အစားအစာတွေ ကျွေးမွေးတာ၊ စိတ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်း နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာ စသည်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက အကျဉ်းထောင်တွေဟာ ကမ္ဘာမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားလှပါတယ်။
စစ်အစိုးရကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဘူးလို့ အစဉ်တစိုက် ငြင်းဆိုလာခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက မပြတ်တောင်းဆိုနေသလို ထိန်းသိမ်းထားသူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့လည်း အခုချိန်ထိ လိုက်လျောခြင်း မရှိသေးကြောင်းပါ။
Tagged with Min Ko Naing